CADAADISKA JEERMISKA (SNAPPER, QAJIYO QOYAN) EE BAKAYLAHA: SABABAHA, CALAAMADAHA IYO DAAWEYNTA - XOOLAHA
Dheecaan (qoyan qoyan) ee bakaylaha: sida iyo daaweynta
Dareemka faafa ee bakaylaha ayaa dhacaya, nasiib daro, badanaa badanaa waxaa sabab u ah fiditaanka degdegga ah ee cudurkan.
Shakhsiyaadka da'doodu u dhaxayso 20 maalmood iyo 3 bilood ayaa ah kuwa ugu nugul, iyadoo haddii cudurku uusan joogsan wakhtigii loogu talagalay, markaa way baabi'i kartaa dhammaan xoolaha.
Sidee baa stomatitis u muujisaa, sida loo daaweeyo iyo caawimaadda tallaabooyinka kahortagga ee laga hortagi karo - aynu eegno faahfaahin dheeraad ah.
Waa maxay stomatitis infekshanka bakteeriyada
Kani waa magaca cudurada faafa ee saameeya xuubka afka, carrabka xayawaanka. Iyadoo ay weheliyaan salivation xoog leh, sababta oo ah wejiyada bakaylaha ayaa qoyan. Sababtan awgeed, fayruska waxaa loo yaqaan 'moccasins'. Cudurku wuxuu ku dhici karaa laba nooc:
iftiinka (difaaca astaamiska ah ee bakaylaha waa xaaladaha badankoodu awood u leh inay la tacaalaan cudurka jirkiisa);
culus (celceliska celceliska qiyaas ahaan 30% dadweynaha).
Qaadashada xoolaha waxay heleysaa difaac nololeed.
Waa muhiim! Tayada hilibka ama maqaarka xayawaanka ma saameynayo cudurka, laakiin faraca dadka shakhsiyaadkaasi waa mid aan loo baahnayn: fayruska ayaa la isugu gudbiyaa hiddo ahaan.
Waa maxay sababta bakaylaha ay leeyihiin waji qoyan
Sababta tooska ah ee stomatitis waxaa loo tixgeliyaa fayraska filterka.
Waxay ku qaadi karaan siyaabo dhowr ah:
laga bilaabo xayawaanka xoolaha (si firfircoon u kobcaya candhuuf, dhiig iyo kaadida);
cunista wasakhaysan shimbiraha ama cuntada cayayaanka;
abuurista jawi nabdoon oo ku saabsan dhacdadeeda (qoyaan sare, isbeddelka heerkulka).
Fayrasku wuxu halis ugu yahay kiiskii baaskiilka, taas oo ah, bakayle hore u lahaa stomatitis, ma laha calaamadaha dibedda ee cudurka, laakiin waxay halis ku yihiin dadka kale. Marka ugu horeysa ee ku dhacdo stomatitis waa nuujin ama bakaylaha uurka, iyo sidoo kale xayawaanka da'yarta ilaa 3 bilood.
Cudurku kuma tiirsanaado xilliga xagaaga, laakiin sababtoo ah guud ahaan daciifinta difaaca guud ee xilliga dayrta-guga, boqolkiiba dhimashada ayaa kordha.
Ma taqaanaa? Bakteerka daqiiqad kasta wuxuu sameeyaa ilaa 120 dhaqdhaqaaq oo jajab ah.
Astaamaha iyo qaababka cudurka
Dareemka faafa wuxuu leeyahay laba nooc: iftiin iyo culus.
Xaaladda kowaad, bakaylaha waxay soo bogsanayaan 10-12 maalmood ka dib marka uu bilawga cudurka (todobaad iyo badh ka dib marka calaamadaha ugu horreeya ay muuqdaan) iyada oo aan la daaweyn.
Iyadoo jiritaanka foomka daran, xayawaanka jiran ayaa u dhinta celcelis 4-5 maalmood.
Noocyada stomatitis waxay ku xirantahay shuruudaha bakayleerka lagu hayo. Haddii ay jirto xad-dhaaf ah heerarka nadaafadda ama tirada xayawaanka ayaa ka sarreeya aagga, ka dibna suurtogalnimada foomka daran wuxuu kordhiyaa.
Nooc khafiif ah oo leh stomatitis infekshanka ayaa lagu aqoonsan karaa sifooyinka soo socda:
jiritaanka quudin firfircoon (u muuqda 2-3 maalmood ka dib caabuqa);
ciriiriga carrabka, xuubka xuubka afka.
luqo barar ah.
Ma taqaanaa? Khamrigu wuu qaylin karaa, waana qeyli karaa. Hase yeeshee, waxay qabtaan kaliya marka ay jiraan xanuun daran ama marka ay aad u baqayaan.
2-3 maalmood, marka uu cudurku galo marxaladda firfircoon, calaamadaha soo socda ayaa soo bixi doona:
lakabka caddaanku wuxuu u rogi doonaa midab madow, ka dibna qaabkani wuxuu bilaabmayaa inuu dhaco;
on bogagga la riixo boogaha yar ayaa soo bixi doona;
Cunuga wuxuu helayaa midab cas oo dhalaalaya oo leh shinni aan caafimaad qabin;
sababtoo ah dheefshiidka badan, dhoobada dhogorta ayaa bilaaban doonta;
maqaarka mugdiga ah ayaa ka muuqan doona maqaarka.
Nooca ugu xun ee cudurku si dhakhso ah u buufinayaan xayawaan, sidaas darteed waxaa lagu gartaa:
Salbalaynta sii kordhaysa;
rabitaanka xayawaanka in lagu jajabiyo geeska madow ee qafiska;
gebi ahaanba qoyan oo qoyan, helitaanka muuqaalka dayacaad sababtoo ah timaha cirridka leh iyo wasakhda qoyan;
shubanka iyo dhibaatooyinka dheefshiidka.
Xaaladdan, bakayle wuxuu u adkeysan karaa wax ka badan 5 maalmood.
Haddii, si kastaba ha ahaatee, in la bilaabo daaweynta, markaa, marka loo eego qaabka khafiifka ah, waxay qaadan doontaa 10 ilaa 14 maalmood.
Waa muhiim! Shakhsiyaadka ka badbaaday ayaa weli maqaarka maqaarka ka dib bacaha, iyo timo jarida agagaarka afka ayaa ku dhacda. Maskaxda ku hayso markaad rabto inaad soo iibsato bakaylaha ama wadaagtaada si aadan u qaadin fayraska.
Sameynta baaritaanka waxaa lagu sameeyaa siyaabo dhowr ah:
baaritaanka xayawaanka buka;
daraasadda xaaladdaha cudurrada faafa ee ku yaalla dhismaha iyo gobolka;
iyada oo loo marayo cirbadeynta.
Saaxiibo aan qafiif ahayn ayaa inta badan ku wareersan gilgillada lays qaadsiiyo cudurada ay ku jirto stomatitis bakteeriyadu ka timaaddo oo ka timaadda xumaanshaha: coccidiosis, xanuunka mindhicirada, kulaylka. Qodobka muhiimka ah ee cudurada kala soocida waa calaamadaha calaamadaha.
Waa in la xasuusto in xaaladahaas, shubanku marka hore u muuqanayo, kadibna salivation, halka qoyaan badani ay tahay mid ku jirta stomatitis viral.
Cudur kale oo leh calaamado la mid ah, rhinitis infekshanka, waxaa lagu gartaa jiritaanka hargab.
Stomatitis viral, isla xeer ayaa khuseeyaa sida cudurrada kale: sida ugu dhakhsaha badan ee aad u bilowdo in lagu daaweeyo, si aad ah u guulaysata waxay noqon doontaa in laga takhaluso.
Ma taqaanaa? Bakayle wuxuu gaari karaa xawaare 55 km / h, oo udhiganta 15 km u dhow qaraabada soodhaweynta ah.
Aan aragno hababka loo adeegsan karo si looga hortago stomatitis.
Mokrets waa cudur muddo dheer la ogaa, daroogo badan oo takhasus leh ayaa loo sameeyay habka daaweynta maanta, oo ay ku jiraan:
Waxay u baahan yihiin inay si taxadar leh u daadiyaan xuubka xuubka leh ee xuubka xayawaanka afkiisa, taas oo ah mid aan ku haboonayn, ama, si loo fududeeyo habka, waa loo qasi karaa emulsion qaro leh, oo ku salaysan qiyaasta 0.2 g halkii qof;
Xalka "Baytril" - oo ay weheliso caawimadeeda waxaa lagama maarmaan ah in la dhaqo afka 2 jeer maalintii;
diyaarinta dareeraha "Biomitsin" qiyaasta qiyaasta 0.02 g halkii 1 xayawaan - maalin kasta oo afka lagu aaso;
Dhibco "Sulfadimezin" (0.2 g) - waxay kaa caawinayaan in laga takhaluso stomatitis, haddii aad iyaga ku aaso 2 jeer maalintii 2-3 maalmood.
Haddii aad ku hawlan tahay bakeylka bakaylaha, ka dibna waxay kuu noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u ogaato nooca bakayleedku u nugul yahay: pasteurellosis, listeraosis, myxomatosis, encephalosis, versicolor, VGBK, rhinitis, iyo sidoo kale cudurada indhaha iyo cududa.
Haddii aadan haysanin daawooyinka kor ku xusan, markaa gargaarka degdegga ah waxaa lagu bixin karaa hababka caanka ah. Waxaa laga yaabaa in aanay awood u lahayn inay la qabsadaan noocyo badan oo stomatitis ah oo iyaga u gaar ah, laakiin waxay awoodaan inay hoos u dhigaan horumarka cudurka. Waxyaabahan oo kale:
Kansar dhalaalaya - ku luqluqo godka afka oo leh 15% xal, iyo xitaa ka sii fiican - maro laba jeer maalintii;
Penicillin waa antibiyootiko ugu horeysay ee uu abuuro nin, waxaa loo adeegsadaa habab kala duwan: subag (sida, 20-30 kun oo ah daroogada ayaa lagu daraa jidhka bakteeriyada) ama ka-gudubka (wax-qabadku waa ka sarreeyaa - 40-50 kun);
Baxsiga penicillin - kiiskan, qalab kaas oo ugu yaraan 200 kun oo antibiyootiko ah oo ah 160-170 g of vaseline waa ku habboon, waa inaad daaweysaa miyir-beelka saameeya laba jeer maalintii bacriminta.
Waa muhiim! Qaar ka mid ah jajabka xoolaha ee khibrad leh waxay isticmaalaan xal of sulphate copper ka dhanka ah stomatitis. Waxaa lagu daaweeyaa dhogorta oo ku wareegsan qoorta, sidoo kale waxay sameeyaan afka ilaa 1-2 jeer maalintii.
Tallaabooyinka ka hortagga ee kiiskan waa mid fudud:
marka la ogaado shakhsiyaadka qaba cudurka, waa in laga soocaa kuwa caafimaadka qaba;
u hoggaansamida heerarka nadaafadda ee qolka bakayle;
siiyaan raashin tayo leh, nafaqo leh oo si sahlan loo adeegsan karo qaybaha;
haddii uu jiro khatar caabuq ah, marmar siin biyaha iodized ee bakaylaha (5 ml iodine 10 litir oo biyo ah);
sida beddelka iodine, kaneecada kaneecada ayaa loo isticmaali karaa;
hubi in aad jeermiska nuujiso ka dib marka xayawaanka jiran.
Si kastaba ha noqotee, tallaalka wakhtiga ah ayaa noqon doona habka ugu waxtarka badan ee looga hortagi karo stomatitis.
Dareemka faafa waa xanuun aan fiicnayn, laakiin si fudud ayaa loo daaweyn karaa. Wax dhibaato ah ma keeni doonto haddii aad si joogta ah u baartid bakaylaha astaamaha shaki laga galo iyo si dhakhso ah uga jawaab haddii ay joogaan. Khatarta stomatitis waxay qarineysaa oo keliya marka ay jirto xaalad ah dayacaad daran, isbedelka cudurku ku keeno qaab daran.